Bilaabista Irishka waxay ururinaysaa M 4.5 milyan si ay uga caawiso beeraleyda inay noqdaan beeraley hemp isticmaalaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn • Daroogada Inc.eu
Bilawga Irish wuxuu uruursadaa million 4.5 milyan si loogu suurtogeliyo beeraleyda inay noqdaan beeraley hemp iyadoo la kaashanayo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn
Shirkad bilow ah oo reer Ireland ah ayaa uruursatay € 4.5 milyan ($ 5,3 milyan) maalgelintii usbuucii la soo dhaafay si ay amaah u siiso beeraleyda Ireland iyo adduunka oo dhan si loogu dhiirrigeliyo inay noqdaan oo u beertaan hemp si loogu isticmaalo cannabidiol (CBD) -Soosaarka.
1 Ururka Cannabis ee beeralayda hemp
2 Raadin buuxda oo laga helo beeralayda hemp ilaa macaamilka
Waxay ku taal ganacsi Greenheart CBDWaxa aasaasay laba sano ka hor Paul Walsh iyo Mark Canavan, waxay isticmaashaa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo sirdoonka macmalka ah si loo kordhiyo wax soo saarka dalaga iyadoo si joogto ah loola socdo caafimaadka dhirta.
Shirkadda, oo hore u heshay ruqsad dawladeed inay xagasha Waxaa ku koray beeraleyda gobolka Co Wicklow ee Ireland, waxay soo saareen tiro ka mid ah macaamiisha dabiiciga ah ee wax soo saarka CBD kuwaas oo si buuxda loo heli karo "min abuur ilaa shelf".
CBD waa xarunta hadda caanka ah ee laga helay dhirta xashiishka sativa; walaalkeed ugu caansan, tetrahydrocannabinol sidoo kale THC, waa maaddada firfircoon ee marijuana.
Shirkadda ayaa dhowaan la saxiixatay qandaraas weyn qaybinta Uniphar si ay u qaybiso alaabteeda waxayna hadda dooneysaa inay ballaariso silsiladda wax soo saarka. Waxay ku guuleysatay, xagga iibka tafaariiqda, inay koraan 10 milyan oo euro oo u dhiganta ($ 12 milyan) oo dalag ah oo laga keenay 10 hektar oo ku teedsan dalka Ireland illaa hadda, laakiin hadda waxay dooneysaa inay keensato hemo badan, gaar ahaan kuwa soo koraya.
Ururka Cannabis ee beeralayda hemp
In kasta oo sumcadda sii kordhaysa ee alaabada CBD, beeralay badan waxay ku adag tahay inay ka helaan maalgelin bangiyada wax soo saarka hemp sababo la xiriira xiriirkooda cannabis. Sidaa darteed Greenheart waxay faragalin ku sameysaa inay si toos ah amaah ugu siiso qandaraasyo caqli badan, oo lagu dhisay tikniyoolajiyadda xannibaadda.
Xaqiiqdii, beeralaydu waxay saxiixayaan xirmo u oggolaan doonta iyaga inay si dhakhso leh u bilaabaan hemp. Abuurka ka sokow, waxay heli doonaan diyaarad aan duuliye lahayn iyo tikniyoolajiyad kale oo casri ah oo ay ku soo saari karaan dalagga ugu fiican ee wax soo saar wanaagsan. Shirkadda Greenheart ayaa markaa ka iibsata dalagga iyaga.
Diyaaradahan ayaa loo adeegsadaa inay si joogto ah ula socdaan caafimaadka dalaga oo ay leeyihiin gacmo lagalaaban karo oo ka saari kara haramaha, soo qaadi kara burooyinkeeda iwm!
“Ma jiraan wax badan oo casriyeyn ah oo dhanka tiknoolajiyadda ah oo dhanka beeraha ah tan iyo markii la soo saaray cagaf-cagaf, laakiin waxaan u maleynayaa in tiknoolajiyadda diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ay wax walba ka beddeli karto,” ayuu yiri Paul Walsh oo ka mid ah bilowga shirkadda.
Amaahda caadiga ah ee loo fidiyo beeralay isticmaalaya qaabka amaahda shirkadda waxay noqon kartaa meel udhaxeysa $ 500 ilaa $ 50.000 muddo shan sano ah, oo leh dulsaar dhan 5 boqolkiiba. Waxaa lagu qiyaasaa in beeraley dunidan soo koraysaa ay caadiyan ka heli karto $ 1.500 sanadkii dalagyada kaashka ah ee jira, laakiin wuxuu heli karaa $ 2.500 halkii wareeg ee dalag dhan hal hektar oo dalagga CBD ah.
Raadin buuxda oo laga helo beeralayda hemp ilaa macaamilka
Sida ay sheegtay shirkaddu, qaabkani wuxuu wax ka beddeli karaa hab-nololeedka beeralayda sidoo kale wuxuu shirkadda u siin karaa marin hemp tayo sare leh, iyadoo sidoo kale siinaysa macaamiisha raadad buuxa oo ah alaabooyinka aan waxyeello u geysan deegaanka.
"Greenheart CBD waxaa ka go'an inay isbeddel ku sameyso adduunkan maanta iyadoo la adeegsanayo qaab gaar ah oo asal ah si looga caawiyo beeraleyda yaryar inay ka soo baxaan dabinka saboolnimada," ayuu yiri Liam Robertson, oo ah agaasimaha Alphabit Fund, oo maalgelin doona € 4,5, -. XNUMX milyan ayaa horseeday.
Shirkaddu waxay dhowaan daahfuri doontaa Greenheart Punt, oo ah aalad dijitaal ah oo la iibsan karo lana iibin karo. Lacagta million 4.5 milyan ee la uruuriyay waxay ka timid maalgashadayaasha iibsaday qaar ka mid ah astaamahan iyo kuwa kale oo dhowaan la sameyn doono si ballaaranna loo heli karo. Hal dhibic ayaa u dhiganta € 0,10 wadar ahaan 150 milyan oo tokens.
Greenheart Punt - calaamo si lacag loogu ururiyo ballaarinta beeralayda hemp iyo drones (afb.)
Kuwa haysta calaamado ayaa u adeegsan kara iyaga inay ku helaan alaabada Greenheart qiimo dhimis weyn. Lacagta laga soo ururiyey calaamadahan Greenheart Point ayaa sidoo kale ka caawin doonta shirkadda maalgelinta iibsashada dhul cusub oo loogu talagalay wax soo saarka CBD iyo dhismaha warshad xajmiga si ay ugu suurto gasho ballaarinta khadadka kale ee alaabada, oo ay ku jiraan qalabka dahaarka iyo bioplastics.
Greenheart waxay horey uheleysaa macaash waxayna keensatay in kabadan 2020 oo macaamiil ah tan iyo markii la bilaabay Janaayo 2.500.
Ilaha waxaa ka mid ah CBDNewsInsider (EN), HempIndustryDaily (EN), Irish Times (EN), Zephyr (EN)
Canna-TechcannatechGreen TechxagashaIrelandbeerista cannabis
Dood Faransiis ah oo ku saabsan sharci dejinta cannabis iyo cunsuriyadda
Xagaagii la soo dhaafay, makhaayadaha CBD-ka ee Faransiiska waxay u soo baxeen sidii boqoshaada. Thanks to mesh in ...
Trimbos ayaa ka digtay khatarta ku jirta gaadiidka sababtoo ah daroogooyinka: 'Ha haawin'
NIJMEGEN - Daroogooyinka waxay u horseedi karaan xaalado qatar ah taraafikada. Gaar ahaan isku dhafka khamriga ...
Tani waa sababta xashiishadda ay waxtar ugu leedahay yareynta caabuqa
Xashiishadda waxay saameyn togan ku leedahay yareynta caabuqa iyo xaalado kala duwan oo ...